. မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၃၁-၁၀-၂၀၁၅ (အပိုင်း – ၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » . မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၃၁-၁၀-၂၀၁၅ (အပိုင်း – ၂)	13
. မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၃၁-၁၀-၂၀၁၅ (အပိုင်း – ၂)
Posted by မြစပဲရိုး on Nov 1, 2015 in My Dear Diary | 13 comments
. မြ သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဝေဖန်ရေး လုပ်သူများ ကို ဘာကြောင့် ရန်လို နေလဲ ကွ ကိုယ် အမြဲ မေးပါသည်။
သူ နိုင်လို့ အစိုးရ တက်လုပ်လဲ ကိုယ့် အတွက် အကျိုးအမြတ် ရစရာလဲ အကြောင်း မရှိချေ။
အခြေအနေကောင်းလဲ ရွာပြန်ပြီး စီးပွါးရေး လဲ လုပ်တတ်သူ မဟုတ်။
ကွကိုယ် ပုံမှန် ဒုံရင်း အလုပ် လေး နဲ့ ကျေနပ်နိုင်သူ ဖြစ်သည်။
အမှန်ပြောရရင် လက်ရှိ နေထိုင်ရာ ကို အသားကျပြီး ရွှေပြည် မှာ ပူ လျှင် မျက်နှာ၊ ခြေ၊ လက် များ ဖောရောင်သည့် အခြေဖြစ်ပါသည်။
. မြ သည် ဇီးသီးသည် မဗျိုင်း ဖြစ်နေလေပြီ။
ဒါကို အသာမနေ ဘဲ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား အကုသိုလ်ပွါး နေတာ သိပ်တော့ အလုပ်မဟုတ်ပါ။
သိပင်သိငြား လစ်လျု မပြုနိုင်အောင် မြ ရဲ့ စိတ်ဒါဏ်ရာသည်ကြီး လှသည်။
. မြ သိကျွမ်းခဲ့ဘူးသည့် စာသင်ခန်း ကို ကျောခိုင်းခဲ့ရသည့် ကလေးတွေ သည် ယခုအချိန်မှာ မြေးပင်ရလောက်နေပြီ။
သူတို့ သားသမီးလေးများ မှာလဲ စာသင်ဖို့ အခွင့်ရမည် မဟုတ်။
တကယ်တော့ သူတို့သည် ရွှေပြည် မှာ ရှိသည့် ကလေး အများစု ၏ ကိုယ်စားပြု ပုံရိပ်များပင် ဖြစ်ပေမည်။
ကိုယ့်သားသမီးကို စာတတ်အောင် တွန်းပို့ နေချိန် ကမ္ဘာ့ တစ်ဖက် မှာ စာမသင်ရလို့ အစဉ်အဆက် ဘဝ နိမ့်ကျနေတဲ့ သူတွေ အများကြီး ရှိနေသည်။
. မြ စိတ်ထဲ သူတို့ အပေါ် တာဝန်မကျေ သလို အမြဲခံစားရသည်။
တကယ်တော့ သူတို့ အတွက် တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာတွေ ရှိ၏။
သို့သော် သူတို့ အတွက် ပျိုးထောင်ရန် အခွင့်မရ။
ထို ကလေးများ ရဲ့ နိမ့်ကျ လာသော ပမာဏ နှင့် တူညီ သော ကြွယ်ဝမှု များ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဒါကို မြ လုံးဝ မကျေနပ်ပါ။
သူတပါး ကြွယ်ဝ တာ ကို မနာလို မရှုစိမ့် ဖြစ် လောက်အောင် မြ စိတ်မယုတ်မာပါ။
သို့ပင်သို့ငြား ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်းမဟုတ်ဘဲ တိုင်းပြည် ကို အသုံးချပြီး ကြွယ်ဝ မှု များ အတွက်တော့ သဘောထားမကြီးနိုင်ပါ။
ထိုသူများကြောင့် မြတို့ ရဲ့ ကလေးသူငယ်အများစု လမ်းမှား ရောက်ကြသည်။ ဘဝ တုံးရသည်။
ဒီအတွက် ထိုလူတန်းစား ကို မြတို့ ဖယ်ရမည်။
ဖယ်နိုင်ရန် ဦးစီးဦးဆောင် ပြုနိုင်သည့် ခေါင်းဆောင် လဲ ရှိနေသည်။
ဒီအတွက် မြ အားတက် မိသည်။
တစ်ဖက် ကလဲ အကြီး အကျယ် စိုးရိမ်သည်။
. နှစ်ပေါင်းများစွာ အသိပညာမဲ့ အောင် အညွန့်ချိုး ပြီး လှောင်ပိတ်ထားခံရသူတို့ ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ များသည် ထင်ထားသည် ထက် ပို၍ ကြောက်စရာကောင်းအောင် နိမ့်ကျနေတော့သည်။
အဆိုးဆုံး မှာ ရွှေပြည်၌ လူတန်းစား အလွှာတိုင်း ၌ “လူသားဆန်သည့် စိတ်ဓာတ်” သည် အများစု မှာ ပျောက်ကွယ်နေ၏။
ထိုအထဲမှာ “ကိုယ်ချင်းစာစိတ်” ဆိုတာလဲ ပါသွားခဲ့သည်။
လူ ကို လူချင်း စာနာ သနားမှု မှာ ပေါ်မလာနိုင်တော့။
ဒါကြောင့် ငါ လုံခြုံ ရင်ပြီးရော၊ ငါ ဝမ်းဝရင်ပြီးရော၊ ငါ သားသမီး စာတတ် ရင်ပြီးရော စိတ်များသာ သူ့ထက်ငါ ထွက်လာနေတော့သည်။
မရှိသူ ကို စားဖို့ သုံးဖို့ စွန့်ကြဲ ပေး လိုက်နိုင်ရင်ဘဲ ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်ကြသည်။
ထို မရှိဆင်းရဲ သူများ ကို မရှိ ဆင်းရဲ မဖြစ် အောင် ဘယ်လို ပံ့ပိုး သင့်သည် မတွေးတတ် ကြတော့ပေ။
မရှိ ဆင်းရဲ သူများဟာလဲ စားဖို့ တောင်အနိုင်နိုင် ဘဝ နဲ့ မျိုးဆက်များ ကို ပညာဖြင့် မြင့်အောင် မစွမ်းနိုင်တော့။
ဒီလို နဲ့ လူ့အလွှာ သံသရာကြီး မပြတ် လည်နေတော့သည်။
ထို ယခု လာတော့မည့် ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ကိုယ်လိုချင်သလို ရလာဒ် ရမည် မမှန်းရဲ ပါ။
.လောလောဆယ် နိုင်လျှင် ဘာဖြစ် မည်နည်း လို့ တွေးသည့် အဆင့် ပင် မရောက် နိုင် အောင် ရှုံးမည် ကို စိုးရိမ် လှပါသည်။
တစ်ဖက် က ရှုံး လျှင် သူတို့ အတွက် ဆင်ပိန် ကျွဲ သာ ဖြစ်ပြီး ဘဝ ပျက်စရာ မရှိ။
တိုင်းပြည် တိုးတက် လျှင် သူတို့ လဲ အနည်း နဲ့ အများ တော့ တက်ဖို့ ပင် ရှိမည်။
လယ်ရီ ဆိုသည့် ဆရာ့ ဆရာကြီး တစ်ယောက် ဟောကိန်းထုတ်ထားသလို ကိုယ့်ဖက်က ရှုံးပြီး အစိုးရဖွဲ့ ခွင့် မရှိပါက စိတ်ဓာတ်ယုတ်နိမ့်သူများ နေရာ ဆက်ယူမည်။
စနစ် ဆိုး အောက်မှာ လူများ စိတ်ဓာတ်ပိုပျက်လာမည်။
ချမ်းသာ ဆင်းရဲ ပိုပို ကွာလာမည်။
ကမ္ဘာ့အလည် စာရိတ္တအပျက်ဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်လာမည်။
မကောင်းသောစိတ် ရှိသူ သည် မကောင်းသော အလုပ် ကို သာ ဆက်ဆက်ပြီး လုပ်ပေလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ကောင်းသောသူ ဖြစ်ပါက ဒီအချိန်သည် မကောင်းမှုများ ကို ရပ်တန်းမှ အရပ်သင့်ဆုံး အချိန်ပင်တည်း။
ဒီအချိန် မှာ မှ မရပ်ကြလျှင် (သို့) သူတို့ ကို ရပ် အောင် အားမထုတ်နိုင်ကြ လျှင် အနာဂါတ်မှာ ကောင်းလာနိုင်ဖို့ အကြောင်း ရှိနိုင်မည်လား။
. မြ တော့ မထင်ပါ။
. မြ အထင် လွဲပါစေသား။
kai says: နောက်တခါအထိဆိုရင်.. ဒေါ်စုအသက်.. ၇၅…
အစိုးရဖွဲ့ပြီးလုပ်မယ်ဆို.. ၇၅ ကနေ..၈၀အထိလုပ်ရမယ်…
အခုအချိန်လေးမှာ.. ဒေါ်စုကိုအသုံးချပြီး.. တိုင်းပြည်အတွက်… အခြေခံအဆောက်အအုံ… အင်ဖရာစရပ်ချာတွေဆောက်ဖို့.. မတည်ရင်းနှီးငွေရှာသင့်တယ်…။
အခြေခံ့… အခြေခံအခွင့်လေးတော့ လူတိုင်း..မြန်မာအိမ်ထောင်စုတိုင်း…ရသင့်…။
အလိုရှိတဲ့အိမ်ထောင်စုများ.. အိမ်ရှေ့… ဖဲကြိုးနီစည်းကြစို့…။
မြစပဲရိုး says: ဒီ အမျိုးသမီးကြီး မှ မရှိရင် တိုင်းပြည် မကောင်းနိုင်တော့ ဘူးလား လို့ မေးကြ တဲ့ သူ တွေ အများသား သူကြီး ရေ။
သူတို့ ကိုယ်တိုင် အဖြစ်မရှိ တော့ စွမ်းအားကြီး တဲ့ လူ ရဲ့ တန်ဖိုး ကို မမြင်တတ်ကြဘူး။ သူ့ကို အသုံးချဖို့ အသိဉာဏ် မရှိကြဘူး။
ဒါပေမဲ့ ပြောသာ ပြောတာ
ဒီ အစိုးရ ကိုယ်တိုင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ပြပြီး လုပ်စားခဲ့ပြီးပါလေ။
အဲဒီ က နေ အခုချိန် ဆုပ်လဲဆူး စားလဲရူး အဖြစ် ရောက်တော့တာ။
kai says: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တင်မည့် သမ္မတ
Saturday, 31 October 2015 13:00 Print Email ‘NLD တက်လျှင်’ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ‘if’ ဆောင်းပါး ယခင်တစ်ပတ်က ရေးခဲ့ပါသည်။ ယခုတစ်ပတ်တွင် ‘ဦးသိန်းစိန်ကို သမ္မတအဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တင်လျှင်’ ဟု မှန်းဆကြည့်မိသည်။
ဦးသိန်းစိန်သည် တပ်မတော်နှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းသူဖြစ်ရာ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များက တင်လိုက်ရုံနှင့် ဒုသမ္မတ ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် လွှတ်တော်တွင်းရောက် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ထောက်ခံမှု ကျန် ဒုသမ္မတနှစ်ယောက်ထက် များမှသာ သမ္မတဖြစ်နုိုင်သည်။
ဒုသမ္မတမှ သမ္မတအဖြစ်သို့ ဦးသိန်းစိန်တက်လှမ်းရန် ဖြစ်နုိုင်ခြေ သုံးခုရှိသည်။
၁) USDP က ကိုယ်စားလှယ် အလုံအလောက် ရရှိလျှင်
၂) NLD မှအပ လွှတ်တော်တွင်းရောက် USDP၊ တစည၊ တိုင်းရင်း သားပါတီ စသည့် ပါတီကိုယ်စားလှယ်များက ထောက်ခံလျှင်
၃) NLD က လွှတ်တော်တွင်း နေရာအများစုရပြီး NLD က တင်လိုက်လျှင်
နံပါတ် ၃ ဖြစ်နုိုင်ခြေသည် ထူးခြားသည့်အတွက် နံပါတ် ၁၊ ၂ ကို အသာထားပြီး နံပါတ် ၃ ကို လေ့လာဆန်းစစ် ကြည့်ပါမည်။
ထိုဖြစ်နုိုင်ခြေကို မဖြစ်နိုင်ဟု လူအများက ထင်ကောင်းထင်မည်။ နိုင်ငံရေးတွင် ဘာမဆို ဖြစ်နုိုင်သည်။ ထို့ပြင်၂၀၁၂တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုက်ကတည်းက မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် ‘မဖြစ်နုိုင်သောအရာ’ မရှိတော့ပါ။
နံပါတ် ၃ ဖြစ်နုိုင်ခြေ ဖြစ်လာရန် ပထမအဆင့်အနေဖြင့် NLD သည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြတ်အသတ် နိုင်ရမည်၊ ဒုတိယအဆင့် အနေဖြင့် ဦးသိန်းစိန်ကို ကမ်းလှမ်းရမည်၊ တတိယအဆင့် အနေဖြင့် ဦးသိန်းစိန်က လက်ခံရမည်။
NLD သည် ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုကာလတွင် ရေပန်းစားနေသည်။ NLD သာ ဦးသိန်းစိန်ကို ကမ်းလှမ်းလျှင် ဦးသိန်းစိန်ကလည်း လက်ခံနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဦးသိန်းစိန်သည် သမ္မတဆက်လုပ်ရန် ဆန္ဒရှိနေပြီး ပထမသက်တမ်းထက် ပိုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည် နေပုံလည်းရသည်။
– See more at: http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/8735-das#sthash.mCjyqTeA.htEVcYZT.dpuf
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျနော်တို့
နိုင်ငံရဲ့ အကုသိုလ် က အတော်ကြီးးပုံ ပေါ်တယ်
kai says: နယူးယောက်က..ဆရာစွမ်းလည်း..ရန်ကုန်ရောက်နေပြီ..
မြန်မာ့ဂဇက်အယ်ဒီတာ့အာဘော်ထဲလည်း.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို.. Endorsement .. ထောက်ခံအားပေး… လုပ်လိုက်ပြီ…။
ဦးကြောင်ကြီး says: မေမေနိုင်မှ ဖြစ်မည်… အူးခိုင်ကယ်မှ ရှုပ်မည်… Please တိတ်တိတ်နေ။
မြစပဲရိုး says: .ကျေးဇူးကြီးပါ သူကြီးမင်း။ :-))
. ကြောင်ကြောင် နီ ရော နာတို့ နဲ့ လိုက်လာမှာ မဟုတ်လား။
ဇီဇီခင်ဇော် says: လိုက်လာတယ်မှတ်တာပဲ
အမေ့ မိန့်ခွန်းးကို ၂ နာရီခွဲထိ မအိပ်ပဲ စောင့်နေဒါ ဆိုလို့ ချစ်ပြီးး အာဘွားးဒေ ပေးးချင်ဒါ…
အပြစ်ရှာဖို့ တော့ မဟုတ်ဘူးး မလားး ကြောင်ကြောင်…
မြစပဲရိုး says: တကယ်လား။
ညစ်ကျယ်ကြောင် မှ ချစ်ဖွယ်ကြောင် ပေါ့။ :-))
ဒီချုပ် နိုင်ခဲ့ရင် ဇကာ နဲ့ စစ်ပြီး ကို အပြစ်ရှာပြစမ်းပါလေ။
အခုလဲ တစ်ချို့ မြင်ရတဲ့ အမတ် တွေ ကို ပြောချင်တာ တွေ ရှိပါ့၊ သို့ပေမဲ့ အချိန် မတိုင်သေးလို့ ပါးစပ်ပိတ်ထားပါတယ်။
အဲဒီထဲ က လူတစ်ချို့ ပြောတော့ အခုထဲက အကြံပြုစာ တွေ တစ်နေ့ တစ်နေ့ မနဲ ရ သတဲ့။
သူတို့ ပြည်သူ တွေ အသံ ကို နားထောင်ပြီး အကောင်းဆုံး လုပ်ဖို့ တော့ ကြိုးစားနေမှာပါ။
အဲဒီ အထဲ မှာ သက်လုံ မကောင်းသူများပါရင် ဘေးထွက် ရမှာပါဘဲ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: မနေ့က ကိုယ်ထိုင်နေတဲ့နေရာနားမှာ VOA က လာထိုင်တယ် . . . ပြီးတော့ အနားကသူတွေကို ဘာကြောင့် NLD ကို မဲပေးမှာလဲလို့ မေးတယ် . . . ကိုယ်လည်းဖြေလိုက်တယ် . . .ဖုန်းဗီဒီယိုလေးနဲ့ ရိုက်တာဆိုတော့ အသံတွေ အကုန်ကြားရပါ့မလားတော့ မသိဘူး . . . ကိုယ်ကတော့ နှစ်ခါလောက် ပြန်ဖြေပေးလိုက်တယ် . . .
”ကျွန်မတစ်သက်လုံး အစမ်းသပ်ခံစနစ်ဆိုးအောက်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတာပါ . . . ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ အနာဂတ်အတွက် . . . ကျွန်မတို့မျိုးဆက်သစ်အနာဂတ်အတွက် ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ စနစ်တစ်ခုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်လို့ NLD ကို မဲထည့်တာဖြစ်ပါတယ် . . . ‘
မြစပဲရိုး says: Well said Thamee. :-))))
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဒီတစ်ခေါက်မဲပေးပွဲမှာ
ကိုယ်ရလာတဲ့ရလဒ်ကို ကျေနပ်စွာလက်ခံပြီးလက်တွဲလုပ်မယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်အခြေမပျက်ဘဲ
တစ်ဘက်ဘက်က မကျေနပ်လို့ ထဆူရင်တော့
အရင်တစ်ခါလိုဘဲ မကယ်တင်ဘူးလို့ ဘယ်သူမှအာမမခံနိုင်ပါဘူး။
ကျနော်အမြင် အကြီးပိုင်းတွေက ညှိနိုင်းပြီးသားလို့ စိတ်ထဲမှာထင်ပါကြောင်း
Alinsett @ Maung Thura says: အမေနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့… ယုံရဲတယ်..
နိုင်ပြီးနောက်မှာ… အရှုပ်တွေ အထုပ်လိုက်ကြီးကို မဖြည်နိုင်သေးခင်မှာပဲ….
အမေ့ကို ပြန်အနိုင်ယူနိုင်ချေ ရှိတဲ့အရာတွေကိုတော့…. မယုံရဲသေးဘူး။